Hoggaamiyeyaasha caalamka oo isugu tegaya UK iyo qodobada ay ka hadli doonaan – DMS
HomeWararkaHoggaamiyeyaasha caalamka oo isugu tegaya UK iyo qodobada ay ka hadli doonaan
Hoggaamiyeyaasha caalamka ayaa isugu tegaya hoteelka Cornish ee Carbis Bay, iyaga oo si fool ka fool ah u yeelanaya shirka dalalka G7.
Madaxdaas waxaa ka mid ah hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel, iyo Madaxweyne Biden, oo ku jira safarkiisii ugu horreeyay tan iyo markii uu xilka qabtay.
UK wuxuu sanadkan 2021 qabanayaa shirka madaxda G7 sidaas darteed ayuu halkaasi shirka uga dhacayaa.
Waxaa bishii January lagu dhawaaqay in kulanku uu ka dhacayo Hoteelka Carbis Bay oo ku yaalla meel u dhow St Ives oo ku taalla Cornwall.
Ma aha markii ugu horreysay ee hoggaamiyeyaasha caalamka ay ku kulmaan hoteel xeebta saaran. Shirkii ugu dambeeyay ee G7 ee sanadkii 2019 waxaa lagu qabtay magaalo-xeebeedka Faransiiska ku taalla ee Biarritz.
Wuxuu shirku saameyn doonaa nolosha dadka caadiga ah ee ku nool Cornwall, iyadoo la xirayo waddooyinka.Ruushka wuxuu kooxdaas ku biiray sanadkii 1998, markaas oo uu ururku isku beddelay G8, balse waxaa laga saaray sanadkii 2014 kaddib markii uu sheegtay Crimea.
Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed oo soo badalay xubinihii guddiga doorashooyinka ee lagu murmay